Faahfahin ku saabsan barnamijka ay sii deysay Janalka Al-Jazeera habenimada Axada oo ay weerar cad ku qaaday heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Somaliland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Faahfahin ku saabsan barnamijka ay sii deysay Janalka Al-Jazeera habenimada Axada oo ay weerar cad ku qaaday heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Somaliland
Published on March 18, 2019 by sdwo · No Comments
Barnaamij ay Isugu Tageen dhinacyada kasoo horjeeda jamhuriyadda Somaliland Iyo Emaaratka Oo caawa laga sii daayay Channelka Aljazeera Tv Iyo Mareegaha ay Ku leeyihiin Internetka. Barnaamijkas Oo Loogu magacabay dagaalkii Dekadaha .
Waxa lagu Aflagadeeyey . Wadamada Somaliland Iyo Emaaaratka Sido kale waxa dagaal ka dhan ah lagu qaaday shirkadaha waaweyn ee Dpworld Iyo Dahabshiil
Barnaamijkas waxa Maalgeliyey Dalka qatar waxa ka qayb qaatay dabadhilifyada Somalia iyo Djbouti, waxa daadihinaysay Naag weriye ah oo kasocota al-Jaseera , waxay ururinaysay Xogtay siideysay mudo Dhawar bilood ah waxay Tagtay Djbouti iyo Muqdisho ,halkasna waxay ku waraystay Madaxda Djbouti iyo Somalia ,kuwaas oo cay iyo af -lagaado u miisay Dalalka la qaban layahay ee Somaliland iyo UAE. Madaxda Djbouti waxay sheegeen inay cabsi ka qaban in Geeska Afrika ay la wareegto Janhuriyadda Soamaliland siyaasiyan iyo Istaarjiyanba Ayna noqoto mid ka horumarsan dhinackatsa .
Halka Wasirka Arimaha dibada somalia sheegay in Emaaratku Albabada kasoo xidhay sidoo kale Somaliland Toos ula macaamilayo si dawlad ahaan ah .
Sido kale waxay sheegen madaxda somalia In ay suuqa ka baxayaan hadanay qatar kasoo gaadhin Somaliland iyo Emaaratka , oo aanay Maalgashan Dekadaha bilaashka ah aanu ku siinay dalka qatar ee Hobyo iyo marko. Wasirku isagoo sii calaacaalaya wuxu sheegay in sucuudiga ay ka dalbadeen in ay Dhex gasho iyaga iyo emaraatka lkn Taas ay emaaratku ka dideen aakhirkina sucudigu tageeray dhinaca emaaratka iyo somaliland.
Sido kale barnaamika waxa lagu sheegay in sadex Jeer in Farmaajo Amiirka Emaaratka ka dalbday in ka tuso Nuqulka Heshiiska Dhexmaray Somaliland iyo Dpworld Lkn taas bedelkeeda laga diidey. *Barnaamijka sido kale waxay Cadawga somaliland ee Jooga Xamar iyo Djbouti iyagoo aan u kala hadhin .si toosa ugu xadgudbeen Arimaha daakhiliga ah ee Jamhuriyada somaliland iyago weriyaha Been badan oo Probaganda ah ka sheegay markasna waxay farta ku tusayeen Doodi aqlaabiyada Dimuquraadiga ahayd ee ay ka yeeshen Baarlamanka Somaliland berigii la ansixinayay heshiiska haamaha Shidaalka . Iyago ku tilmamay midii lagu ansixiiyay Heshiiska Dpworld ee Berbera . Waxana Suganaba jawabta ay ka bixiso Xukumada Somaliland
Sido kale Waxa meel looga dhacay sharafta Shirkada ugu weyn geeska Afrika dhanka xawiladaha iyo Isgaadhsinta Dahabshiil iyagoo cadawga somalia iyo Aljazeera(qatar) sheegay inay Dahabshiil tahay Mid maalgelisa Argagixisada Somalia sido kalena Xidhidhka Dp world ee geeska afrika qayb weyn ku leh.
Intii uu socday barnaamijku waxa lagu soo qaatay , Ganacsadaha Reer Djbouti ee magangelyada ku jooga Dubai, ninka ku hadlayay afka Djbouti aya sheegay inuu yahay maskaxda ka danbaysa In ay is bartaan Somaliland Iyo Shirkada Dbworld ….
sidokale waxay lagu soo hadal qaaday Barnaamijka Saldhigyada Milateri ee Emaaratku ka furtay Eratariya Iyo Somaliland iyago dhamantood cabasho ka Muujiyay Heshiyada dhanka Milatariga iyo Maalgashiga ee ka dhaxeeya Somaliland ,emaarat iyo Erataria.sheegayna in Stilletka ay ka arkeen dhismaha saldhig weyb oo caskariga ah ee magalo xeebeda Berbera.
Aakhirki Barnaamjiskaas Wuxu muujiyay Dagaalka diblumasiyadeed iyo ganacsi ah ee ka curtay Geeska Afrika iyo wadamada Khaliijka Carabta inuu cirka isku sii shareeray, waxana durbaba Iska Cad in ay Guul Taagan Yihiin, Hargeisa Iyo Abudhabi iyo wadamo badan oo xulufo la ah, Halka Doha ,djbouti Iyo Mugdisho Godkooda biyo Ugu galeen , Siyaasadoodina ay kusoo ururtay Afka hadal iyo Probogando.
Waxa xusid mudan ,Djbouti waxa maxakamad Kula Jira Emaaratka midas oo lagu wado inay dhawan go,aan kasoo baxo , waxana iska Cad in ay emaratku Ku guuleysan doonan marka loo eego dhanka Sharciga Maalgashiga ee ay hore u saxeexen kaas oo lagu magacabo The English law ,heshiiskana bilaa shuruud waxa Jebiaay Djbouti.
Sido kale Somalia waxa maxakmad kula Jira kenya, waxyana dhankooda wajahayan dhibaato badan , Waxana soo baxaysa In Kenya Iyo emaraatka ay dhawaan heshiis ku geli doonan Dekada mombasa iYo Dpworld sido kalena arimo dhanka Saldhig milatari uu jiro, Waana iyadoo somalia ay heshiis la gashay gashay Turkiga oo dekada Mugdisho gacanta ku haya, Halka ay Qatar ka warwaregayso inay Toos faraha ula gasho meel turki uga horeyey. Ayna somalia ku qasbayso inay Toos isugu luga duwato dhankeda hadii ay ka rabto in ay tageero Hiil iyo Hooba ku garab istaagto iyadoo , taasna ay Xukumada somalia rabto inay ku wareejiso dekadaha Hobyo iyo marko halka ay iyaduna rabto Mida Suuqa sare leh ee mogdisho, somalia sido kale Gacan kuma hayso dekadaha Kismaayo Iyo mida Bosaaso wax go,aan dawladeedna kama gaadhi karto waxana ka arimiya Maamul goboleedyo ka amar qaata kaaba qabiilkoda.
Sido Kale Qatar lafteeda waxa saaran Cuna qabatayn bad iyo beri iyo cir ba ah oo ay saaren Saaxibada khalijka carabta ee Bahrain ,saudiarabia ,oman iyo UAE.
Sido kale Waxan sugnaaba Waa Jawabta Ay ka bixiyaan barnaamijkan Fashilka ah Majaladaha Ku hadla Afka xukumadaha iyo shucuubta la wareeray.
Sido kale waxaba iska cad dagaalka ay xukumada Farmaajo Iyo Inta la fikirka ah ay ku hayaan , ganacsiga xorta ah ee Shirkadaha Dahabshiil Iyo qaar kale oo badan oo ka hawl gala geeska Afrika ilaa heer ay gaadhen in ay ka codsaan inTelefeshanka Alajazeera ee laga leelayahay dalka qatar ay propogando ku saabsan shirkadas laga sii daayo , Hore waxa ay dagaal ugu qaaden Kooxda Farmaajo shirkadaha diyaaradaha Ee Juba iyo daalo oo ay leeyihin sherka u badan ganacsato kasoo jeeda somaliland waxayna Ku soo dareen suuqa duulimaadka , Diyaarad,Ganacsi oo cusub oo iyaga Danahoda u fulisa ,sido kale waxay dagal kula Jiraan Ganacsiga shacabka Muqdisho gaar ahaan beesha Hawiye sida Hormuud telecom oo marar badan ganacsigeda ku fara geliyeen ,
sido kale waxay Weerar Toos ah ku qaaden siyaasiyinta beesha Hawiye sida xasan sheekh iyo Abdirahamn Abdishakuur. Waxayna isku dayayan Inay Go,doon geliyaan Ganacsiga reer muqdisho, waxana la arkaa durbaba in ay meelkasta kasoo xidheen Horumarka Magalada muqdisho, sido kalena ay awdeen dhamaan Heshiisyadii siyaasiga aha ee ay galeen madaxdii hore ee somalia. Sidoo kale waxay u adeegayaan danahoda keliya oo ay ka helayaan Qatar iyo turkiga.waxana sugnaba waa halka ay dhigaan arimaha somalia Kooxda Siyaasada ka aradan ee fadhida Villa Somalia. Waxan kuso afmeraya Maqalkan Shacabka Somaliland iyo Xukumadooda waxa la gudboon inay ogaadan Dagaalka Cadaawaded ey ku so qadeen Somalia, djbouti Iyo Qatar. Waxana Loo baahan yahay in Midnino Iyo wadajir lagaga Hortago iyadoo Lays barbartaagayo xukumada Iyo xulufadeeda siyaasiga ah.